Wararka Maanta: Sabti, Aug 3 , 2013-Dagaal beeleed Khasaare Nafeed geystay oo Maanta ka Qarxay Deegaan ku yaalla Koonfurta Gobolka Mudug
Dagaalkan oo salka ku haya is-qabqabsi dhinaca dhulka ah ayaa dhowr jeer oo hore beelahan ku dhexmaray deegaannada hadda lagu dagaallamayo oo ah kuwa la isku haysto, waxaana lasoo sheegayaa in weli dagaalku ka socdo deegaankii uu ka billowday.
“Inta la hubo waxaa ku dhimatay dagaalka afar qof oo malleeshiyooyinka dagaalamaya ka kala tirsan, waxaana dagaalku uu daba socdaan kuwo horay u dhexmaray labada beelood,” ayuu yiri goobjooge ku sugan deegaanka Bacaadweyne oo mid ka mid ah beelaha dagaallamaya ay kasoo jeeddo.
Ma jiraan dadaallo lagu doonayo in dagaalkan lagu hakiyo oo ka socda halka uu ka qarxay, waxaana dadka u dhow deegaannadaas ay sheegeen inay tan iyo saakay maqlayeen hubka ay dhinacaydu isku adeegsanayaan.
“Xaalad cabsi leh ayaa taagan, dhinacyada dagaalamaya waxaa soo gaaraya gurmadyo kala duwan, dhaawacyo dhowr ah oo dagaalka ka dhashay ayaa loo qaaday maagaalooyinka waaweyn si loogu daweeyo,” ayay tiri haweeney ku nool deegaan ku dhow deegaanka uu dagaalku ka socdo.
Beelahan ayaa dagaalkoodu wuxuu soo billowday sannadkii 2009, iyadoo ay ku naf-waayeen dad badan oo ay ku jiraan qoysas si gaadmo ah loo laayay, iyadoo heshiisyo laga gaaray dagaaalladan ay shaqeyn waayeen.
Maamullada Ximan iyo Xeeb iyo Galmudug oo maamulka deegaannada kala sheegta ayaan ka hadlin dagaalka socda, sidoo kalena ma jiraan wax lug ah oo ay ku leeyihiin, sida ay soo sheegayaan dadka deegaannadaas ku nool.